IOM : Gujii fi Geediyoo Keessa Ummata Gara Miliyoona Tokkootu Buqahe
Eega baatii Caamsaa dabree hookkarri Itiyoophiyaa gama Kibbaa keessatti hawaasa godinaalee Gujii fi Geediyoo keessa jiraatu gidduutti ka’ee as uummatni gara miliyoona tokkoo tahu manaa fi qehee isaanii irraa buqqa’anii dheessuu isaanii, qorannaan Jaarmayaa Godaantootaa ka sadarkaa Addunyaa – IOM beeksisee jira.
Akka gabaasaan kun jedhutti, uummatni manaa fi qehee ofii irraa buqqa’e gara kuma dhibba saddeetii tahu haala gaddisiisadhaan, godinaa Geediyoo keessa jiran. Kanneen hafan immoo, godinaa Gujii keessa jiran.
Namoonni buqqa’an irra-jireessi, hawaasa naannoo keessa ka qabatee jiru tahuu isaa fi kaan immoo, bakkawwan akka manneen barnootaa fi manneen ijaaramanii hin dhumne keessa akka qubatanii jiran – ka jedhu gabaasichi – gamooleen sun kan jireenya dhala-namaaf hin taane tahuu dubbata. Namoonni hedduun ala keessa kosii xuraawaa irra rafu – jedha.
Waa’ee gabaasaa kanaa kan ibsa kennan duubbi-himaan IOM – Joel Milman, aanaalee godinaa Gujii rakkoon kun mudate jaha keessaa, jaarmayaan isaanii – sababaa rakkoo nageenyaaf jecha afur qofa daawwachuu danda’e – jedhanii, godinaalee lameen keessatti rakkoo sana qorachuun kan itti fufu tahuu dubbatan.